Otu esi etinye Desktop Plasma KDE na Rocky Linux 8 - LinuxCapable
Otu esi etinye Desktop Plasma KDE na Rocky Linux 8
November 18, 2021 by Jọshụa James
Ọkwa dị mkpa Tupu echichi
Wụnye EPEL & Raven Repository
Kwado ebe nchekwa akụrụngwa ike
Wụnye KDE Plasma na Rocky Linux
Lelee mbụ & nyochaa Desktop Plasma KDE
Aha KDE si na "K Desktop Environment." Maka ndị na-amaghị na Desktọpụ KDE, ọ bụ ebe desktọpụ n'efu, mepere emepe. Ọ na-enye ndị ọrụ Linux na nkesa dị iche iche ihe eserese eserese ọzọ iji hazie gburugburu desktọpụ ha na ngwa maka nkwalite ojiji kwa ụbọchị.
N'okwu Rocky Linux, nke a bụ Gnome. E wezụga nkwalite eserese na mgbanwe, ọ bụkwa ebe dị fechaa, ngwa ngwa, dịkwa larịị nwere arụmọrụ dị elu ma e jiri ya tụnyere kọmpụta ndị nwere ụfọdụ Nkesa Linux.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye KDE Desktop Environment na sistemụ arụmọrụ Rocky Linux 8 gị.
chọrọ: internet Njikọ
Tupu ịwụnye desktọpụ KDE, mepụta nkwado ndabere na mpaghara ma ọ bụ atụmatụ ma ọ bụrụ na ịchọghị ya ma chọọ ịtụgharị azụ. Iwepu Gburugburu Desktọpụ ọ bụla adịghị mma na ọ ga-eduga na nkwụsi ike nke sistemu yana ngwa enweghị usoro ka arụnyere. N'ozuzu, ọ bụ usoro na-egbu mgbu ịlaghachi na steeti mbụ tupu etinyere ngwugwu ahụ, karịsịa maka onye ọhụrụ na nkezi onye ọrụ.
Ọ gwụla ma ị nwere obere akụrụngwa sistemụ, ịnwe ọtụtụ gburugburu desktọpụ agaghị egbochi sistemụ gị. Ọtụtụ mgbe ndị mmadụ nwere ọtụtụ ma na-atụgharị n'etiti.
Ọrụ mbụ bụ ịwụnye ebe nchekwa Raven na EPEL (Ngwugwu Mgbakwunye maka Linux Enterprise) ebe nchekwa. Ụlọ ọrụ Red Hat na-echekwa ngwungwu EPEL (RHEL). Agbanyeghị, ọ bụghị ihe ndabere niile ka emelitere. A chọrọ ebe nchekwa Raven iji mee ka etinyere ngwugwu ụfọdụ, gosi ala egwu ahụ.
Ogologo oge, enwere ike wepu ma ọ bụ dobe nke a ozugbo emelitere EPEL maka RHEL 8.5 dịka ọ na-efunahụ ya n'oge nkuzi a gbasara ikuku-gtk-nkịtị ngwugwu. Agbanyeghị, ebe nchekwa Raven gụnyere ngwungwu ole na ole emelitere dị ka editọ ederede nano na ụfọdụ ngwugwu ndị ọzọ, yabụ na ọ bara uru idobe ya.
Mepee ọnụ ọnụ gị, wee jiri iwu na-esonụ nke ga-arụnye ebe nchekwa EPEL na Raven.
Na-esote, gosi na otu ngwugwu dị na sistemụ gị.
Na-esote, wụnye ma mee ka ebe nchekwa ahụ nwee ike ikuku-gtk-nkịtị ngwugwu.
N'oge nrụnye, a ga-akpali gị ibubata igodo GPG maka ebe nchekwa Raven.
Ụdị Y, wee pịa Tinye igodo ịga n'ihu na mezue nrụnye.
Ọrụ nke abụọ tupu ịwụnye KDE Plasma bụ ime ka ebe nchekwa ngwaọrụ ike. Nke a na-enye ohere iji ngwaọrụ njikwa ngwugwu Linux ọkọlọtọ gị, yum maka Red Hat Enterprise Linux na zypper maka SUSE Linux Enterprise Server, iji wụnye ngwugwu ndị ị chọrọ na-akpaghị aka n'usoro nke sistemu chọrọ.
N'ọnụ ọnụ gị, detuo ma jiri iwu na-esonụ.
Na-esote, gosi na agbanyere ebe nchekwa ahụ site na iji dnf repolist iwu.
Ugbu a gaa n'ihu na akụkụ nke nkuzi ma wụnye KDE Plasma.
Site na ebe nchekwa achọrọ arụnyere, ị nwere ike ịmalite ịwụnye desktọpụ ọzọ maka sistemụ Rocky Linux 8 gị.
Nke mbụ, n'ọnụ ọnụ gị, gbaa mbọ hụ na KDE dị.
Ugbu a gaa n'ihu ịwụnye KDE Plasma.
N'oge nrụnye, a ga-akpali gị ibubata igodo GPG maka ebe nchekwa EPEL.
Ụdị Y, wee pịa Tinye igodo iji mezue nwụnye.
Echichi ekwesịghị iwe ogologo oge. Na ngwaike ochie na ịntanetị nwere oke, ọ nwere ike were ọtụtụ nkeji.
Na-esote, tọọ sistemu ebumnuche ndabere ka ọ bụrụ eserese site na iji iwu dị n'okpuru.
Mgbe emechara, malitegharịa sistemụ gị.
Ozugbo ị malitegharịrị desktọpụ gị, ị ga-abata na ihuenyo nbanye gị.
Nke mbụ, ịkwesịrị ịlele gburugburu desktọpụ. Emere nke a site na ịpị bọtịnụ nhazi dị n'akụkụ bọtịnụ nbanye.
Ọzọ, họrọ "Plasma (Wayland)" ma ọ bụ "Plasma (X11)" kama ndabara "Standard (ihe nkesa ngosi Wayland)."
Rịba ama, nkuzi ahụ họọrọ Plasma Wayland iji nwalee ịgba ọsọ ya, na maka ihe ọ bara uru, ahụghị nsogbu ọ bụla n'oge ule ahụ.
Ozugbo ịbanye, ị ga-ahụ mgbanwe UI ole na ole ma e wezụga ụdị agba na mgbanwe ndabere. Ogwe ọrụ ugbu a dị ka ụdị ọrụ windo karịa, yana mgbakwunye ndị ọzọ n'akụkụ aka ekpe na aka nri nke ọrụ ebe ngosi oge dị.
Iji kwado nrụnye ahụ, ngwugwu dị mma ịwụnye bụ Neofetch, nke a na-abịa na ebe nchekwa EPEL nke ị rụnyere na mbụ.
Iji tinye ngwungwu a, jiri iwu na-esonụ na ọdụ gị.
N'ime nkuzi a, ị mụtala nke ọma ka esi etinye KDE Plasma Desktop Environment. N'ozuzu, KDE bụ nnukwu ọrụ obodo maka ndị na-achọ nkwụsi ike na ọ dị mma maka ndị chọrọ ihe kachasị na desktọpụ ha, laptọọpụ, na netbook ma na-ahọrọ ihe atụ desktọọpụ omenala.
Maka ozi ndị ọzọ maka iji KDE Plasma, gaa na ntuziaka akwụkwọ ntuziaka.
Categories Nkume linux Tags gburugburu Desktọpụ, Gburugburu Desktọpụ Plasma KDE, Nkume linux Mail igodo
Otu esi etinye Desktọpụ Xfce na AlmaLinux 8
Otu esi etinye XanMod kernel na Linux Mint 20